Gated ma ọ bụ nke edeghị ede: Mgbe? N'ihi gịnị? Olee otú ... | Martech Zone
Gakwuru ndị na-ege gị ntị site na ịbanye na omume dijitalụ ha na-enwetakarị nnweta site na mgbasa ozi ezubere iche na mgbasa ozi. Inweta akara gị na uche nke onye na-azụ gị, na-enyere ha aka ịmatakwu akara gị ma nwee olile anya ịbanye ha na njem onye ahịa a ma ama siri ike. Ọ na-ewe ọdịnaya nke na-emetụta mkpa ha na ọdịmma ha, a na-ejere ha ozi n'oge kachasị mma iji mee ka usoro ahụ dị ọkụ.
Otú ọ dị, ajụjụ a ka na-ajụ bụ na ị kwesịrị “izochi” ụfọdụ n'ime ọdịnaya ndị na-ege gị ntị?
Dabere na ebumnuche azụmahịa gị, ịzobe ma ọ bụ "ịkọ ọnụ" ụfọdụ ọdịnaya gị nwere ike ịbụ mmetụta dị oke egwu maka ọgbọ ndu, nchịkọta data, nkewa, ịre ahịa email, yana imepụta echiche bara uru ma ọ bụ iche echiche nke ndu na ọdịnaya gị.
Kedu ihe kpatara ọdịnaya Afọ?
Inweta ọdịnaya nwere ike ịbụ ụzọ dị oke mkpa mgbe ị na-achọ iwulite mkpọsa ịzụlite ma kpokọta ozi gbasara ndị na-ege gị ntị. Nsogbu nke na - eme mgbe ị na - eri nnukwu ọdịnaya bụ na ị na - ewepụ ndị na - ege ntị, ọkachasị ndị ọrụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na enwere ike ịnweta ọdịnaya gị na weebụsaịtị gị-mana ọ gafere ọnụ ụzọ ahụ nwere ike igbochi ndị na-ege ntị ịchọta ma ọ bụ ịhụ ya. Usoro nke iji ihe eji eme onu ogugu bu ihe gbara ndi n’enye ume ka ha nye ha ihe omuma banyere onwe ha n’ime akwukwo iji nata ugwo.
Ihe egwu di na njiri onu ahia dikwa nfe: igbochi ọdịnaya adabaghi ​​nwere ike igbochi ndi na ege gi nti itinye aka na ika gi.
Nyochaa Ọdịnaya maka atinggụ / Ọgụgụ?
Tozọ nyocha nke ọdịnaya kachasị mma maka ọnụ ụzọ ma ọ bụghị ọnụ ụzọ ámá nwere ike kewaa n'ime ụzọ atọ:
Ọnọdụ Njem Ndị Ahịa
Ezigbo-ezubere, Ezi Ọdịnaya
Ajuju maka ndi njem ahia:
Kedu ihe dị n'ime njem ndị ahịa ahụ?
Ha bu ulo anumanu na-amuta ihe banyere ulo oru gi?
Ha maara aha gị?
Gated ọdịnaya bụ ihe dị irè karị maka nurturing na-achịkọta data mgbe ndị ahịa bụ n'etiti echiche na nnweta na-adọ n'ihi na ha bụ ndị dị njikere inye ozi ha na-enweta kpọrọ ọdịnaya. Site na imepụta “eriri eriri velvet” nke iche, onye ọrụ nwere ike ịnyekwu ozi maka ọdịnaya "adịchaghị", mana ọ bụrụ na agbachi ọdịnaya niile, ọ ga-efunahụ mmetụta ya ezubere iche.
Ọ bakwara uru nke ukwuu maka ichebara echiche na nnweta ọdịnaya nke ụlọ ọrụ gị maka na ị nwere ike ịdakwasị ndị na-ege ha ntị karịa ma mee ka ndị na-ege ntị tinye aka.
Ajuju maka Ajuju Ajuju Ajuju:
Kedu isi okwu ọchụchọ eji dị na ọdịnaya a?
Ndi mmadu na acho okwu ndia?
Anyị chọrọ ndị na-achọ okwu ndị a ka ha chọta ọdịnaya anyị ka ọ bụ na ọ chọghị?
Ndị na-ege ọchụchọ bụ ndị ọrụ anyị bu n'obi?
Ndị na-enyocha ọdịnaya gated si na ọdịnaya bara uru yabụ ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ndị na-ege ntị na-ege ntị ga-ahụ uru dị na ọdịnaya gị, iwepu ya na nyocha (gating ya) ga-eme nke ahụ n'ụzọ dị mfe. Ihe ịma aka kasịnụ mgbe ị na-aza ajụjụ ndị a bụ ịchọpụta ma ị ga-atụfu okporo ụzọ ọchụchọ bara uru site na ịnweta ọdịnaya. Jiri Google Webmaster Ngwaọrụ iji mata ma ndị na-ege ntị na-achọ gị isi okwu n'ime ọdịnaya buru oke ibu. Ọ bụrụ na ndị nyocha ahụ bụ ndị ọrụ ebumnuche gị, tụlee ịhapụ ọdịnaya ahụ agụghị.
Tụkwasị na nke a, site na ịkọpụta ọdịnaya megide ọkwa ya na njem ndị ahịa, ị ga-ahapụ onwe gị ịmepụta oghere njem ahaziri iche. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịmatakwu ọdịnaya (nke kachasị elu) na ọha na eze na-eche ihu n'ihu onye ọrụ ahụ na-aga, ọ bara uru maka ọdịnaya ahụ. Dị nnọọ ka ihe ọ bụla bara uru, ndị mmadụ dị njikere "inye / kwụọ" maka ya.
Ajụjụ maka Ọdịnaya Hyper-Target:
Ihe ndị a na-elekwasị anya na mmemme, ụlọ ọrụ, ngwaahịa, ndị na-ege ntị, wdg.
WNdi ọha na eze enwere ike ịchọta ọdịnaya a ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụ dị mkpa?
Ihe ederede a zuru oke ma ọ bụ dị oke oke?
Na mgbakwunye na ịdepụta ọdịnaya gaa njem ndị ahịa na ịghọta uru ọchụchọ ọchụchọ nke ọdịnaya gị nwere, tụlekwara nsogbu nsogbu ọdịnaya gị na-edozi. Ihe ederede doro anya nke na-ekwu banyere mkpa, ọchịchọ, ihe mgbu, ngalaba nyocha, wdg. Na-eme ka ohere ndị na-ege ntị nwee ike igosipụta ozi nkeonwe ha. Enwere ike iji ozi ahụ wee kewaa ndị ọbịa saịtị, ndị mmadụ, ma lelee profaịlụ n'otu n'otu n'ime mkpọsa kwesịrị ekwesị ka emesịa tinye aka na ntanetị ahịa ndị ọzọ dị iche iche dịka email, ịzụ ahịa akpaaka / ịzụlite azụlite, ma ọ bụ nkesa mmekọrịta.
Na mmechi, gating vs. not gating ọdịnaya nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na usoro ịhazi usoro. Nkwado a na-atụkarị ga-abụ ịkpado ọdịnaya ahụ n'ụzọ dabara adaba ma lebara akụkụ ndị a ga-eji dị ka "adịchaghị" anya ma ọ bụ na ọ bụghị.
N'oge mgbe ndị ọrụ dijitalụ na-ejikọkarị ọdịnaya dị ha mkpa, ọ dị mkpa ịghọta etu esi azụlite ha site na ngwakọta agwakọta nke ọdịnaya agbadoro na enweghị akara. Ersebanye na omume ha bụ isi ihe na mmetụ mbụ ahụ, mana ọdịnaya ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị, maka "ọnụahịa" ziri ezi nye onye ọrụ bụ ihe ga-eme ka ha laghachite.
Tags: njem ọdịnayanjem ndị ahịaahịa njem ogbogated ọdịnayagating ọdịnayalebara anyaolu ọchụchọezubere iche ọdịnaya
Otu esi emejuputa ihe omuma ihe omuma